Dhibka i heysta waa in si rasmi ah loogu dhawaaqay in aan dhintay, | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Dhibka i heysta waa in si rasmi ah loogu dhawaaqay in aan...
Dhibka i heysta waa in si rasmi ah loogu dhawaaqay in aan dhintay,
Haweeney u dhalatay Faransiiska, oo lagu magacaabo Jeanne Pouchain, ayaa ka cabaneysa dhibaato layaab leh – oo ah inay qof dhintay ka tahay sharciga dhankiisa. Muddo saddex sano ah ayey isku dayeysay inay caddeyso in ay nooshahay haddana waxay ku jirtaa cabsi kaddib markii ay dowladdu billowday in ay hantida qoyskeeda u qaadato deymo la sheegay in la bixin waayay.
“Dhibka i heysta waa in si rasmi ah loogu dhawaaqay in aan dhintay,” ayey tidhi Jeanne Pouchain.
Hadalkaas waxaa laga yaabaa in uu yahay wax iska ciyaar ah, laakiin sidaas ayaa ku dhacday haweeneydan 58 jirka ah ee ku nool meel u dhow magaalada Lyon ee dalka Faransiiska.
Arrintan waxay sababtay in sharcigeedii aqoonsiga iyo shatigii gaari wadista laga burburiyay dhinaca dowladda. Xitaa waxaa laga saaray liiskii shacabka ee ay dowladda ugu jirtay, ceymiskeediina waa la joojiyay.
“Waan dhintay. Qof dhintay ayaan u ahay maxkamadaha, hayada dowladda, cid walba xageeda waan ka dhintay”
Iyadoo ka hadleysay telefishin maxalli ah ayey intaas ku dartay: “Waxaan dareemayaa sidii inaan ku jiro cadaab joogto ah.”
“Bannaanka uma bixi karo sababtoo ah ma aqaanno waxa dhici kara haddii la i xiro, ama uu dhib igu dhaco. Haddii aan adeeg doonanayo madaxa ayaan hoos u dhigaa ama waxaan tagaa xilliyada dukaamada la xiri rabo.”
“Ninkeyga ayaa soo adeega. Kuma dhici inaan gaadhi wado, anigoo waliba darawal ah. Markii aan subixii soo kaco maalinta way ila dheeraataa.”
Dhibkan ma aha mid mardhow yimid – Jeanne waxay sharci ahaan qof dhintay u ahayd muddo saddex sano.
Ma nooshahay mise way dhimatay?
Markii ugu horreysay ee ay ogaatay in aysan sharciga xagiisa ka nooleyn, aad bay u naxday, sida qof walba oo kaleba uu uga argagaxay.
“In aanan nooleyn waxaan ku ogaaday xukun ay soo saartay maxkamadda Lyon,” ayey tidhi Jeanne.
Maxkamaddu waxay labo warqadood usoo dhiibtay qoyskeeda, mid loogu talogalay ninkeeda iyo mid loogu talogalay wiilkeeda.
“Markii aan warqadahan, waxaan ogaaday in aan ka dhintay sharciga xagiisa.”
Waxay u muuqataa in dhibka Jeanne uu ka billowday dacwad uu maxkamadda ka geeyay qof horay ugu ahaa shaqaale.
Jeanne waxay lahaan jirtay shirkad nadaafadda ka shaqeysa, haweeney horay shaqaale ugu ahaan jirtay waxay ka raadineysay magdhow ay u rabtay shaqadeeda oo ay weysay 20 sano ka hor.
Kiiskaas wuxuu maray maxkamado kala duwan oo ku yaalla Faransiiska muddo sannado ah, ilaa ugu dambeyn sanadkii 2017-kii ay amxkamad ku taalla Lyon ay xukuntay in khasaarihii ka yimid arrintaas ay tahay in magdhow laga bixiyo, balse maamulihii shirkaddaas nadaafadda ay geeriyootay.
Jeanne waxay sheegtay in aan waligeed looga yeerin maxkanadda, sidaas darteedna aysan fursad u helin in ay wax ka dhahdo kiiska loo heysto iyo midka dhimashadeeda ku saabsan midna.
Taas waxay sababtay in dhimasho oo kaliya aan loogu ekeynin, laakiin sidoo kale waxaa ninkeeda iyo wiilkeeda lagu amray in ay bixiyaan $17,000 oo magdhow ahaan loo siinayo haweeneydii horay shaqaalaha ugu ahayd.
Labojeer kaliya ayaad noolaan kartaa
In ka badan saddex sano ayaa kasoo wareegtay xukunkaas maxkamadda, walina Jeanne waxay isku dayeysaa in ay dowladda Faransiiska ka dhaadhiciso sidii ay mar kale u diiwaan galiyaan.
“Waxaan doonayaa in xukuumadda ay i siiso sharcigeygii aqoonsiga. Waa la iga qaatay sharcigii. Waxaan rabaa inaan nolosheyda dib u helo, qoyskeyga dib u helo, wiilkeyga, iyo bulshadeydaba.”
Previous articleXisbiga Frp oo ka hor yimid in la joojiyo imtixaanadka sare ee dalka Norwey.
Next articleUp to 2.7 million people in Somalia face Crisis (IPC Phase 3)